Dhaxalsugaha Aala-Sucuud oo ku wajahan Maraykanka, lana kulmi doona madaxweynaha dalkaas. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhaxalsugaha Aala-Sucuud oo ku wajahan Maraykanka, lana kulmi doona madaxweynaha dalkaas.
On Mar 13, 2018 263 0
Muxamed bin Salmaan dhaxalsugaha koowaad ee maamulka Aala-Sucuud ayaa la filayaa inuu gaaro maanta magaalada Newyork ee dalka Maraykanka, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha dhimirika la’ ee dalkaas Donald Trump.
Muxamed bin Salmaan oo booqasho ku tagay dalka Ingiriiska, ballaayiin doollarna ugu deeqay dowladda Ingiriiska ayaa hadana la filayaa in heshiisyo ku sheeg horleh uu laso ssaxiixdo dowladda Maraykanka, kaas oo ku baxaya hanti farabadan.
Haweeneyda Afhayeenadda ka ah Aqalka cad ayaa mar la waydiiyay in kulanka labada masuul lagu soo hadal qaadi doono arimaha xuquuqda insaanka waxay ka gaabsatay iney ka jawaabto arintaas, iyadoona sheegtay in wax weliba la ogaan doono marka uu kulanku dhaco.
Booqashada Muxamed bin Salmaan ee dalka Maraykanka waxay timid xilli wargeyska Washington Post uu daabacay warbixin dheer taas oo ku xaqiijiyay in xubno kamid ah qoyska talada haya ee lagu xiray bilo kahor hotel ku yaala magaalada caasimadda ee Riyaad ay la kulmeen tacdiib daran, iyagoona lagu qasbay iney Muxamed bin Salmaan uga tanaazulaan malaayiin dollar oo kamid ah hantidooda.